Iindaba - China Yurhwebo lwamanye amazwe Umboniso weDijithali egcinwe eBeijing
I-China Yurophu i-International Trade Digital Exhibition, neyayixhaswa yi-China CCPIT, i-China Chamber of International Commerce kunye ne-China Service Trade Association ngokudibeneyo, ibibanjelwe e-Beijing ngo-Okthobha u-28 kulo nyaka.
Lo mboniso ngowokukhumbula unyaka wama-45 wobudlelwane be-Sino-Yurophu, ukukhuthaza ubudlelwane phakathi kwe-China ne-Yurophu, ukujongana nomceli mngeni ovela kwi-COVID-2019 kunye nokunyusa imilinganiselo ebonakalayo kwintsebenzo esemgangathweni kunye nophuhliso lwe-Sino-Europe Economy kunye nezorhwebo. . Umboniso uqhubeke malunga neentsuku ezili-10, ujolise ekumiseni iqonga lonxibelelwano kumashishini amaTshayina nawaseYurophu ngeqonga le- "Trade Promotion Cloud Exhibition" kwiqonga leCCPIT Digital Exhibition Service Platform, elinokunceda amashishini ukuba afumane amathuba okubambisana kunye nokwandisa iimarike zamanye amazwe.
Okwangoku, uqoqosho lwehlabathi luyasokola ngokuchaseneyo kunye noKhuselo kunye nokunyuka kwe-unilateralism. Ukusukela kulo nyaka, ichukunyiswe yi-COVID-2019, kwenzeke uqoqosho lwehlabathi kunye nokwehla okukhulu kurhwebo lwamanye amazwe kunye notyalo-mali. Kukunyanzelisa ubunye nentsebenziswano kuphela, yiyo loo nto singadibana ukujongana nomceli mngeni kumngcipheko wamanye amazwe kwaye siqonde ukuchuma okuqhelekileyo kunye nophuhliso. I-China CCPIT iya kuqhubeka nokusebenzisana neqela ngalinye ukwenza iqonga elingcono lotyalo-mali lweshishini lase-Sino-Europe, ukubonelela ngenkonzo engcono kunye nokulula ngakumbi.
Angaphezulu kwe-1,200 amashishini avela kumaphondo angama-25 afana neLiaoning Phondo, iPhondo le-Hebei, iPhondo laseShanxi njl njl. Ikhathalogu yemveliso igubungela izixhobo zonyango, izinto zokwakha kunye nezixhobo, iiofisi, ifanitshala, izipho, izinto ezisetyenziswa ngombane, izixhobo zasekhaya, amalaphu kunye nezambatho, ukutya njl.njl.njnkonzo yenkonzo enje ngomzi mveliso, iinkonzo zobugcisa njl.njl. 'Indawo yokuboniswa kwezixhobo zokulwa ubhubhane'. Ngaphezulu kwe-12,000 abathengi abavela kumazwe angaphezu kwama-40 aseYurophu anjengeNorway, iSweden, iNetherlands njl.